भिडियोमा यसरी खुले रियल जोडी ! (भिडियोसहित) « Drishti News – Nepalese News Portal
भिडियोमा यसरी खुले रियल जोडी ! (भिडियोसहित)
२८ श्रावण २०७६, मंगलबार 6:13 pm
काठमाडौं, २८ साउन । गायिका अनिला राई म्युजिक भिडियोमा मोडलका रुपमा देखिएकी छन् । उनी आफ्नै गीत ‘तिमी बाहेक कसैलाई’ बोल गीतको भिडियोमा मोडल बनेकी हुन् ।